[Review] Top 5 Xe đạp điện nào tốt nên mua nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Xe đạp điện nào tốt nên mua nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Njengamanje, ukwenza lula ukuhamba, nokuqinisekisa ukuphepha kwethrafikhi kubantu abasha abangaphansi kweminyaka eyi-18, ulayini Ibhayisikili likagesi wazalwa. Lena inketho efanelekile yabafundi, elula kakhulu uma kungadingeki ukuthi unyathele kanzima futhi ungadingi ukufaka uphethiloli. Ngakho-ke yimaphi amabhayisikili kagesi angcono kakhulu emakethe ongawathenga?
1 Liyini ibhayisikili likagesi?
2 Ingabe kufanele ngithenge ibhayisikili likagesi?
3 Imibandela yokukhetha ukuthenga ibhayisikili elihle likagesi
3.1 I-Vehicle Design
3.2 Sebenzisa ibhethri
3.4 Ibhrendi kanye nentengo
4 Amabhayisikili kagesi aphezulu angu-5 adumile namuhla
4.1 1. I-Bridgestone SLI48 . Ibhayisikili likagesi
4.2 2. Ibhayisikili likagesi le-Dibao Ninja Eco
4.3 3. Ibhayisikili likagesi Hkbike Zinger umbala 2 batusa ukuthenga
4.4 4. Pega Zinger 9. ibhayisikili likagesi
4.5 5. Yamaha HX F1 .Ibhayisikili likagesi
5 Amanothi lapho uthenga futhi usebenzisa ibhayisikili likagesi
Liyini ibhayisikili likagesi?
Ibhayisikili likagesi iyimoto enamasondo amabili enomklamo ocishe ufane nebhayisikili, kodwa ifakwe injini kagesi. Ngenxa yalokho, kusisiza ukuthi sihambe ngokushesha nangomzamo omncane kunamabhayisikili avamile. Imodeli yebhayisikili kagesi ayifani nesithuthuthu esisebenza ngophethiloli esisebenzisa ibhethri likagesi njengesisekelo. Ngakho-ke, ifaneleka kakhulu kubafundi abasebasha kanye nabafundi. Ngaleyo ndlela sihamba ngokushesha, ngaphandle komzamo omkhulu, kodwa futhi kuyimfashini futhi kuphephile.
Ingabe kufanele ngithenge ibhayisikili likagesi?
Mhlawumbe awazi, the Ibhayisikili likagesi waqala ukubonakala e-US. Futhi ngentuthuko esheshayo ukuthi namuhla amabhayisikili kagesi athandwa kakhulu kunezithuthuthu noma izimoto. Kodwa ukuthi uthenge ibhayisikili likagesi noma cha kuseyindaba ebaluleke kakhulu.
Idizayini, isitayela: Ngomklamo ohlangene nokusebenza okulula, ibhayisikili likagesi lifanele yonke iminyaka ukuze lisetshenziswe. Ngaphezu kwalokho, amamodeli wamabhayisikili kagesi ahloselwe ukulula nobusha ngemiklamo eminingi edonsa amehlo kusukela ku-compact kuya enkulu ongakhetha kuyo.
Kuphephile: Amabhayisikili kagesi awadingi ukuthi umshayeli abe nezincwadi zokushayela. Ngaphezu kwalokho, uma kuqhathaniswa nesivinini, amabhayisikili kagesi agijima ngokushesha kunamabhayisikili endabuko kodwa asaqinisekisa ukuphepha lapho egijima nemishini yamabhuleki eqinisekisiwe.
Ukonga izindleko: Ngokungafani nezithuthuthu, Ibhayisikili likagesi Ngokukhokhiswa okukodwa nje, ungahamba ibanga elide kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kuye ngemodeli yemoto, kungenzeka ukuthi uhambe ibanga elingamakhilomitha angama-40-80 ngaphandle kokuphelelwa ugesi. Ngakho uma kuqhathaniswa nokushayela isithuthuthu, izindleko zikaphethiloli zishibhe izikhathi eziningi, zifaneleka kakhulu abafundi.
Ubungane bemvelo: Ukusebenzisa ibhayisikili likagesi ngeke ukhiphe intuthu eyingozi endaweni ezungezile. Lokhu kusiza ukuvikela nokugcina indawo ezungezile ihlanzekile futhi iphephile.
Imibandela yokukhetha ukuthenga ibhayisikili elihle likagesi
Ukukhetha ukuthenga ibhayisikili elihle likagesi, elifanele izidingo zakho, ungabhekisela kulezi zindlela ezilandelayo.
Okwamanje Ibhayisikili likagesi Kunemiklamo eminingi ehlukene namamodeli, afanele iminyaka eminingi. Ngakho kuncike ekuthandweni kwakho ukuthi ukhetha umklamo wemoto ngokufanele. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi ubeke phambili izimoto ezinosayizi omncane uma uhamba nomuntu oyedwa kanye nesihlalo esingeziwe uma uhamba nabantu abangu-2.
Izizukulwane ezedlule zamabhayisikili kagesi zasebenzisa amabhethri ukuze zisebenze, kodwa ngokushesha aphelelwa ugesi. Ngakho-ke manje, ngobuchwepheshe bebhethri ye-Lithium obuthuthukisiwe, isize ukwelula impilo nokunciphisa isisindo semoto. Ngakho-ke, kufanele ukhethe ibhayisikili likagesi elisebenza ngebhethri ukuze ukwazi ukugijima ibanga elingafika ku-70km.
Lapho uthenga Ibhayisikili likagesi Kufanele futhi unake isici somthwalo imoto engakwazi ukuyiphatha. Ngoba ngaphezu kokuhamba wedwa, uzodinga futhi ukuletha izihlobo nabangane abaningi. Ngakho-ke, ibhayisikili elijwayelekile likagesi lidinga ukuqinisekisa ukuthi umthwalo we-130kg noma ngaphezulu.
Ibhrendi kanye nentengo
Okokugcina, lapho ukhetha ibhayisikili likagesi, kufanele ukhethe imikhiqizo yemikhiqizo emikhulu efana ne-Honda, Yamaha, Asama … Intengo incike ezimweni zezomnotho ngoba kunamamodeli amaningi amabhayisikili kagesi ashibhile kodwa ekhwalithi.
Amabhayisikili kagesi aphezulu angu-5 adumile namuhla
Uma udinga ukuthenga Ibhayisikili likagesi izinga kodwa usazibuza ngoba maningi kakhulu amamodeli wemikhiqizo, ungawazibi neze iziphakamiso ezi-5 eziphezulu ezilandelayo.
1. I-Bridgestone SLI48 . Ibhayisikili likagesi
I-Bridgestone SLI48 iwumugqa wamabhayisikili kagesi anomklamo othambile, onobungane, ikakhulukazi okonga amandla futhi ephephile endaweni ezungezile. Ngaphezu kwalokho, le modeli yebhayisikili kagesi nayo ithuthuke kakhulu kunamamodeli wangaphambilini anama-pedals angu-2. Ukuvimbela lapho ibhayisikili liphelelwa ugesi, ungakwazi ukunyathela ngokuphelele njengebhayisikili elivamile. Isiteringi semoto siklanywe ngendlela elula, okwenza kube lula kuwe ukusilawula. Isihlalo sehhashi lehlukaniswe izingxenye ezimbili, izihlalo zangaphambili nezangemuva, ezifanele omama abahambisa izingane zabo esikoleni
I-Bridgestone SLI48 ibhayisikili likagesi sebenzisa amabhethri anekhono lokushaja elivelele I-Lithium – amabhethri e-ion. Ngenxa yalokhu, imoto ikwazi ukuhamba ibanga elingafika ku-100km. Nokho, ukuze ufinyelele ibanga elingamakhilomitha angu-100, igquma lidinga ukuthi uhambe ngesivinini esilinganiselwe esingaba ngu-20 km / h, futhi ungathwali izinto ezisindayo, uhambe emigwaqweni emibi. Ngaphandle kwalokho, leli bhayisikili likagesi libuye libe lesimanje ngokwedlulele futhi lisebenziseka kalula uma lihlanganisa yonke imisebenzi yebhethri, ibanga, isivinini, njll., ngaleyo ndlela lenze kube lula kuwe ukuhamba.
Intengo yesithenjwa: 19,500,000 VND.
2. Ibhayisikili likagesi le-Dibao Ninja Eco
Lona ulayini wamabhayisikili kagesi womkhiqizi we-Dibao, owethulwe ngo-2015, futhi wangenisa i-CBU evela e-Taiwan. Ibhayisikili likagesi le-Dibao Ninja Eco inamabhethri angu-5 inguqulo ethuthukisiwe ye-Ninja Dibao. Imoto inomklamo ohlangene onesihlalo esixhunywe, ukukhanya okungaphambili kubekwe endaweni ephakeme futhi kunamandla okukhanya okuhle uma uhamba ebumnyameni. Ngaphandle kwalokho, isibani sangaphambili se-Xinhan siphinde sakhelwe ukuthi sibe sikhulu futhi sibe sihle. Amalambu angemuva nawo anwetshiwe, kanti ingemuva lehhashi lakhiwe ngendlela enkulu yokubeka ingalo ukusiza abagibeli abangemuva ukuthi babambe kakhudlwana.
Amasondo e-Dibao Ninja Eco afakwe ubuchwepheshe bamathayi e-tubeless ukusiza imoto ukuthi ihambe ngokuphepha, ivimbele ukuqhuma noma ama-spikes. Okunye ukuthuthukiswa kule modeli uma kuqhathaniswa nenguqulo yangaphambilini isistimu yamabhuleki angemuva. Isikuta sikagesi se-Ninja Dibao Eco siphinde sibe nesethi yamabhethri angu-5 angu-60V-12Ah esivumela ukuthi sisebenze ngomthamo ongafika ku-600W futhi sifinyelele isivinini esikhulu esingu-~40km/h, ibanga elingaba ngu-60km ezimeni ezikahle.
Intengo yesithenjwa: 11,500,000 VND.
3. Ibhayisikili likagesi Hkbike Zinger umbala 2 batusa ukuthenga
Uchungechunge lwamabhayisikili kagesi lwe-Hkbike Zinger Color 2 lunamasondo angu-16-inch alloy ngaphambili, ukuze uthole isiqiniseko esiphezulu kanye nokumuncwa kokuthuka okuthulile. Qiniseka ukuthi uhamba kahle ezindaweni ezahlukene ukuze udale umuzwa onethezeke kakhulu womsebenzisi. Idizayini yebhasikidi yangaphambili iklanywe nge-alloy yensimbi, ngaphandle imbozwe ngesendlalelo esihle sepulasitiki esilwa ne-scratch. Ubhasikidi uvulekile futhi unesivalo ukuze ukwazi ukugcina izinto eziningi.
I-Hkbike Zinger Color 2. ibhayisikili likagesi Iphinde ifakwe izibani ze-LED ezithuthukisiwe uma kuqhathaniswa nenguqulo yangaphambili ukuze inikeze izici ezivelele ezifana nalezi: Ukonga amandla, i-engeli yokukhanyisa ebanzi, ephephile uma uhamba ebusuku ….Ikakhulukazi amabhayisikili Iphinde ibe nobuchwepheshe obukhethekile be-Fit-eyelids obuthuthukisiwe obungangeni manzi, ngakho-ke akufanele ukhathazeke ngakho emvuleni. Imoto ingaphinde igijime ifike ku-75km/1, iqinisekise ukuthi ibanga lakho liphelele.
Intengo yesithenjwa: 11,000,000 VND.
4. Pega Zinger 9. ibhayisikili likagesi
I-Pega Zinger 9 iphawula impumelelo yokwenziwa kwasendaweni kokukhiqizwa kwamabhayisikili kagesi e-Pega eVietnam ngenxa yokusetshenziswa kobuchwepheshe baseYurophu kusukela kumotho, isilawuli sejubane, isilawuli kanye neshaja. Ngaleyo ndlela ukwandisa ukuxhumana okuphelele, ukwandisa ukusebenza kahle kokusebenza ku-95%, ephakeme kakhulu kunamanye amabhayisikili kagesi. Ngaphezu kwalokho, uhlaka lwebhayisikili likagesi i-Zinger 9 lenziwe nge-carbon steel ehlangabezana nezindinganiso zekhwalithi zaseYurophu zomthamo omuhle kakhulu wokuthwala.
Ukwengeza, ngebanga lokuhamba elifika ku-80km / ukushaja, ibhayisikili likagesi le-Pega Zinger 9 libeke irekhodi elisha mayelana nokonga amandla ebhayisikili kagesi. Ibhayisikili likagesi. Uma iqhathaniswa namanye amabhayisikili kagesi emakethe angahamba kuphela cishe u-45 – 55km/ukushaja, i-Zinger 9 ayigcini nje ngokusindisa amandla kodwa futhi inikeza ulwazi oluphelele kakhulu. Imoto futhi inokumelana namanzi okuphelele, hhayi ingxenye yenjini kuphela kodwa yonke imininingwane yemoto kusukela kwizikulufi, amabhuleki, u-chassis … iklanyelwe ukuthi ingangeni manzi ngokuphelele.
5. Yamaha HX F1 .Ibhayisikili likagesi
Okwamanje Yamaha HX F1 . ibhayisikili likagesi ngcono kunamamodeli angaphambilini anamasondo amakhulu njengezithuthuthu ezingu-18×2.5 inch. Ngaso leso sikhathi, iphinde ifakwe izinto zokudonsa ngaphambili nangemuva, ama-hydraulics amade futhi abushelelezi kawoyela kanye namabhuleki amakhulu njengezithuthuthu zikagesi. Leli bhayisikili likagesi lase-Yamaha liyikhwalithi yesikulufu ngasinye, elakhelwe ukuba lifanele zonke izifundo ezifana nabafundi, abafundi, abantu abaneminyaka ephakathi … Ibhayisikili linohlu olugcwele lwezinsiza ezifana nalezi: Iwashi, ukukhanya kwenkomba, ibhuleki lesandla, isihlalo sehhashi. , ibhethri, isihlalo sangemuva….
Leli bhayisikili likagesi laseYamaha likusiza futhi ukuthi wonge ugesi omkhulu futhi uvikele indawo eluhlaza nehlanzekile. Imali ngayinye isebenzisa ugesi ongu-0.5 kuphela, okuvumela ukuthi uhambe ibanga elingu-60-70km, ukuze ukwazi ukuhamba inyanga yonke ngaphandle kokusebenzisa izikweletu zikagesi eziyizi-10,000. Imoto iphinde ifakwe amathayi angenawo ama-tubeless, avimbela imoto ukuthi ingaphelelwa umoya ngokuzumayo uma inamathela esipikili ngephutha. Imoto futhi inefomu elihle lokuklama elinemibala eminingi ongayikhetha.
Intengo yesithenjwa: 10,800,000 VND.
Amanothi lapho uthenga futhi usebenzisa ibhayisikili likagesi
Ibhayisikili likagesi elula kakhulu futhi ihlala isikhathi eside, kodwa ukuze uqinisekise ikhwalithi engcono kakhulu yomkhiqizo, kufanele unake izinkinga ezimbalwa lapho uthenga futhi usebenzisa kanje:
Ngaphambi kokuthenga ibhayisikili likagesi, kufanele ucwaninge ukuze ukhethe ibhayisikili elifanele iminyaka yakho, umzimba, ubulili, nephakethe.
Kufanele uqaphele ngokucophelela ukwakheka kwemoto, injini futhi kufanele ihlole ukushayela imoto khona kanye esitolo ukuze uhlole.
Kufanele ucele umdayisi ukuthi abonise imvelaphi nemvelaphi yemoto kanye nesitifiketi sobuchwepheshe kanye nesitembu sewaranti. Ikakhulukazi izingxenye ziyatholakala ukushintshwa lapho imoto iphuka.
Lapho ugibele, udinga ukunyathela izikhathi ezimbalwa ngonyawo lwakho lwangemuva uma unalo, bese uphendula i-throttle ukuze usebenze. Izimoto zidinga ukuhlanzwa njalo kanye nokuhlola amathayi, amarimu kanye nezingxenye zamabhuleki….
Akufanele ugeze imoto ngaphansi kombhobho we-pressure ngoba amanzi angakwazi ukungena kalula enjinini nasebhethrini, okuholela ekulimaleni okusheshayo kulezo zingxenye.
Ngakho-ke sisanda kuqeda nawe ukuze sifunde ulwazi oluwusizo mayelana nomugqa womkhiqizo Ibhayisikili likagesi ntofontofo. Ukusebenzisa ibhayisikili likagesi kokubili kuphephile, ukonga kanye nemvelo. Ngaphezu kwalokho, ijubane lokuhamba nalo lishesha kakhulu, ngakho kungani ungathengeli umndeni wakho ibhayisikili likagesi ngokushesha?
Xem Thêm Trên tay Google Pixel 4a 5G: Lựa chọn mới cho phân khúc tầm trung | Muasalebang
Top 5 Kem trị thâm mụn tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Hướng dẫn tách nhạc từ YouTube đơn giản trên máy tính | Muasalebang